Home News Sawir Qaade Saciid Fadhaye oo weli u xiran Dilkii Elmaas Elman &Dowlada...
Sawir Qaade Saciid Fadhaye oo weli u xiran Dilkii Elmaas Elman &Dowlada FDS oo ku Guul darysatay in ay sicad u sheegto cidii Dilkaa kadambaysay
Tan iyo Marakii Muqdisho gaar ahaan Xalane lagu dilay Elamaas Elman ayaa waxaan jirin ilaa iyo hada cid loosoo qabtay Dilka Elmaas ama baaritaan dheeraad ah oo lasameeyay oo kiis kaa laxariira.
Marka laga soogato inuu ilaa iyo hada xiranyahay Suxufiga lagu magacaabo Saciid Fadhaye oo ahaa Filim qaade ku noolaa dalka UK, balse la socday todobaadkii hore markii ay xabada ku dhaceysay Almaas Elman, ayaa wali wuxuu u xiran yahay dowladda Somaliya.
Macada ilaa iyo hada sabaabha loo haysto Weriyahaa ku noolaa Dalka UK Saciid Fadhaye ayaa waxaa laga qaaday Passport UK ee uu haystay, waxaana looga qaaday sabab la xiriirta inuusan dalka ka bixi karin, isaga baaris ay ku socoto.
Lataliyaha amniga Qaranka Madaxweynaha Soomaaliya Cabdi-Siciid Muuse Cali oo ka jawaabayey eedeymahan oo baraha lagu qoray ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray wuxuuna ku sheegay in “qofka kaliya ee geeskeeda fadhiyey gabadha markii ay xabadu ku dhacday waa goobjoogaha dilka Almaas oo baaritaan lagu hayo.
Dadkii ay kuwada noolaan jireen Weriye Saciid Fadhaye Dalka UK ayaa waxa ay aad uga walaacsanyihiin Nolasha iyo bad qabka Suxufigaa loo haysto Dilkii Almaas Elama oo Magaalada Muqdisho lagu dilay.